» मेक्सिकोमा सडक मर्मत नगरेको भन्दै मेयरलाई ट्रकको पछाडि बाँधेर घिसारिएको थियो !हाम्रो नेपालमा कहिले यस्तो गर्ने दिन आउला ? भिडियो सहित हेर्नुहोस मेक्सिकोमा सडक मर्मत नगरेको भन्दै मेयरलाई ट्रकको पछाडि बाँधेर घिसारिएको थियो !हाम्रो नेपालमा कहिले यस्तो गर्ने दिन आउला ? भिडियो सहित हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
मेक्सिकोमा सडक मर्मत नगरेको भन्दै मेयरलाई ट्रकको पछाडि बाँधेर घिसारिएको थियो !हाम्रो नेपालमा कहिले यस्तो गर्ने दिन आउला ? भिडियो सहित हेर्नुहोस
बीबीसीले उल्लेख गरेअनुसार मेयरमाथिको यो दोस्रो आ क्रमण हो। यस अघि चार महिना पहिले पनि स्थानीयले मेयरको कार्यकक्ष घेरेका थिए। तर मेयर कार्यकक्षमा नभएकोले स्थानीयको आ क्रमणबाट जोगिएका थिए। मेयरलाई सडकमा घि सारेको घटनामा संलग्न ११ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। अहिले चिएपास राज्यस्थित उक्त गाँउमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको
उक्त भिडियो हेरौं…